Ndị na -emepụta ngwá ọrụ na ndị na -ebunye ihe - ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke China
Sistemụ ime ụlọ dị ọcha nke lVEN na-enye ọrụ usoro zuru oke nke na-ekpuchi imewe, imepụta, nrụnye na inye ọrụ na ọrụ ikuku na-eme ka ọ dị ọcha dabere n'ụkpụrụ dị mkpa yana sistemụ ogo mba ụwa ISO /GMP. Anyị eguzobela iwu, nkwa dị mma, anụmanụ nnwale na ngalaba mmepụta na nyocha ndị ọzọ. Yabụ, anyị nwere ike zute ịdị ọcha, ntụ oyi, sterilization, ọkụ, mkpa eletriki na ịchọ mma n'ọhịa dị iche iche dịka ikuku, elektrọnik, ahịa ọgwụ, nlekọta ahụike, bayoloji, nri ahụike na ịchọ mma.
Osmosis na -atụgharị bụ narị afọ nke iri asatọ mepụtara teknụzụ nkewa akpụkpọ ahụ, nke na -ejikarị ụkpụrụ permeation membrane mepere emepe, iji nye ya otu ụzọ site na itinye nrụgide na ntụzịaka ebumpụta ụwa megide ike nke mmiri dị na ngwọta a gbanyere mkpọrọgwụ tụgharịa ihe ngwọta ka ọ banye n'ime. Ụzọ a ka a na -akpọ reverse osmosis. Site na ngwa nke ngwaọrụ a bụ osmosis reverse osmosis unit.
Enwere ike iji akụrụngwa a na ọgwụ, nri, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ihe nchekwa mmiri. Enwere ọmarịcha ọmarịcha, ọrụ dị mfe, a kwadebere tank ahụ na isi nhicha na -akpaghị aka, iji hụ na nhicha zuru oke, ihe ejiri SUS304 ma ọ bụ SUS316L, jiri enyo na -egbu maramara ma ọ bụ ọgwụgwọ elu matte, zute ọkọlọtọ GMP.
Mmiri sterilizer ịsa mmiri na-eji mmiri na-ekesa mmiri dị elu dị ka ụzọ nsị, wee rụọ ọrụ ịgba mmiri na karama LVP PP. Site na ngwaọrụ nchedo nrụgide, enwere ike itinye ya n'ọrụ n'ọtụtụ ebe na-arụ ọrụ sterilizing na-adịghị ala na mmiri mmiri n'ime karama iko, karama ampoule, karama plastik, akpa rọba wdg na ụlọ ọrụ ọgwụ. Ọ dịkwa mma maka ụlọ ọrụ nri iji sterilaiz ụdị ihe ngwugwu ọ bụla, ihe ọ drinksụ, ụ, wdg.
Ampoule Machine À Coudre Led, Igwe eji emejuola agịga, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Ampoule Machine À Coudre Bernina,